चिया बेचेरै गर्छन् असायलाई सहयोग बनेका छन् भुस्याहा कुकुरका अभिभावक - PUBLICAAWAJ
प्रदेश ७ भिडियो समाचार
चिया बेचेरै गर्छन् असायलाई सहयोग बनेका छन् भुस्याहा कुकुरका अभिभावक
प्रकाशित : बिहिबार, माघ ०३, २०७५१४:४९ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
जगदिश गिरी/ पब्लिक आवाज
कसैलाई सहयोग गर्न धेरै पैसानै हुनुपर्छ भन्ने छैन ठूलो मन भए पुग्छ । यसका एक उदाहरण हुन सञ्चार चोकका चिया व्यापारी मदन चन्द । कञ्चनपुरका मदन चन्दको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको सञ्चार चोकमा एउटा चिया पसल छ । मदनले चिया बेचेरै आफ्नो घरपरिवार मात्र पालेका छैनन् धेरैै असायका साहरा पनि बनेका छन् । साथै महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका भुस्याहा कुकुरहरुका अभिभावक पनि ।
चन्दलाई धूम्रपानको विरुद्धमा उभिएको एक शसक्त खम्बाको रुपमा पनि यस क्षेत्रमा लिइन्छ । उनले सुरुमा एउटा सानो खुद्रा पसलबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरे । खुद्रा पसल भन्ने बित्तिकै धूम्रपानजन्य वस्तु त अवश्य पनि बेचिन्छ नै । उनले पनि यस्तै गरे । तर धूम्रपानको कारण उनले आफ्ना आमाबुवालाई गुमाउनु प¥यो । यस पछि उनले धूम्रपान बिक्रि बितरण गर्न छोडे ।
अहिले महेन्द्रनगरको सञ्चार चोकमा उनको सानो चिया पसल छ । उनि धूम्रपान निषेधका अभियन्ता भएर काम गरिरहेको छन् । धूम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएकाले धूम्रपान आफू पनि सेवन गर्दैनन् र अरुलाई पनि सेवन गर्न दिदैनन् । उनि धूम्रपान बिक्रि गर्नु भनेको विष बेच्नु सरह मान्दछन् । त्यसैले उनि यस क्षेत्रका लागि धूम्रपान विरोधका एउटा खम्बा हुन ।
शसस्त्र द्वन्द्धका समय घाईते समेत भएका मदन चन्दले सबैलाई चकित पार्ने उदाहरणिय काम गरेका छन् । उनले महेन्द्रनगर बजारका भुस्याहा कुकुरलाई आफ्नो चिया व्यवसायबाट कमाएको पैसाले खाना दिने गर्दछन् ।
बजार क्षेत्रमा रहेको भुस्याहा कुकुरलाई उनले विभिन्न नाम दिएका छन् । कसैको नाम “कालू कसैको लालू ,अझ सांसद देखि मन्त्री सम्म “सबै नाम दिएका छन् । उनले बोलाउने बित्तिकै कुकुरहरु पनि खाना खान पुग्छन् । नयाँ ग्रहकलाई उनले कुकुरलाई सांसद मन्त्री भनेर बोलाउँदा संसदभवनमा भएको भान हुन्छ । आउँदा भुस्याहा कुकुर आए पछि फिस्स हाँस्छन् ।
हेल्प नेपालका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका मदन समाजसेवीको रुपमा समेत चिरपरिचित छन् । उनले बिभिन्न सामाजिक कार्य , दिनदु:खीलाई पनि सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । निकट भविष्यमा पनि यसरी नै आफू समाजिक व्यक्ति भएर अगाडि बड्ने उनको सोच रहेको छ । हेर्नुहोस् उनि संग पब्लिक आवाजले गरेको विशेष कुराकानी भिडियोमा
माइक्रोबस दुर्घटना, ठुलो दुर्घटनाबाट चालकले जोगाए ११ जनाको ज्यान !
मधेसमा पूर्वराजाको स्वागतमा व्यस्त जनता !
जग्गा किन्ने बहानामा आएका लुटेराको कुटपिटबाट मृत्यु
बाढी र विपद् जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने
बाढीका मृतक परिवारलाई प्रदेश सरकारले ३ लाख दिने, तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार